Fiaraha-monin’i Babanao… • AoRaha
Raha misy ny ampiana amin’izay fanapahan-kevitra raisin’ny fitondram-panjakana ankehitriny momba an’ireo fitsipi-pitondran-tena mila ananan’ireo manampahefana isan-tsokajiny, amin’izao fotoana izao, dia ny jadona amin’ny rariny sy hitsiny. Mampatahotra antsika ny maheno an’io voambolana io saingy tsy maintsy lalan-kizorana raha tena iriana tokoa ny hisian’ny filaminana sy fifanajana ao anatin’ny fiarahamonina indray.
Tany an-tampony hatrany amin’ny isan-tokantrano no nanjakan’ny mandeha ho azy teto Madagasikara, efa ho am-polony taona maro nifandimby izao. Nahakely finoana ny nieritreretana tany aloha tany hoe mbola azo saintsainina ve ny hametraka fitsipi-pitondran-tena hentitra amin’ny isam-batan’olona? Tao ho ao, nampian’ity hoe: “toa tsy volan’i Babanao…”, izay toy ny nilazana fa samia miatrika ny eo ambany masony, tsy mifampananatranatra, tsy mifanakiankiana, tsy mifampiteniteny, sy ny sisa. Dia toy ny tsy tany tsy nisy fanjakana tokoa teto matoa lasa nahazatra ny maso ary neken’ny saina ny mahita an’ireo fiaram-panjakana manao izay danin’ny kibony.
Fandotoana eny an-dalambe. Fanorenana tsy ara-dalàna etsy sy eroa. Mpitandro filaminana mpiray tendro amin’ny jiolahy. Manampahefana mpisolelaka… Lava ny lisitra.
Tahaka ny mampatsiahy ny fitondram-panjakana ankehitriny fa fiarahamonintsika ny tany, hatramin’ny iray milimetatra toradroa, manerana ny Nosy. Atomboka avy any ambony tokoa ny ohatra. Maodely ireo mpitondra satria inona tokoa moa no manahirana azy ireo: trano, sakafo, fiara, birao tsara tarehy, karama ambonin’ ny sahaza. (Betsaka ny teboka telo amin’ireo fitanisana samihafa satria tena tsy ary ho voatanisa eto daholo tokoa ny lohahevitra iray). Rehefa miadana ianao, angamba, tsy manan-jo ny hivaralila intsony. Teo aloha mantsy, arakaraka ny mampisonanina ny sasany no vao mainka mampanaonao foana sy mampanaram-pahefana azy. Ekena kosa fa vao ny fikasana arahina fanapahan-kevi-dehibe no mivoaka aloha, hatreto, raha ny vinavinan’ny fitondram-panjakana amin’izany fitakiana ny fanajana ny fitsipi-pitondran-tena eo amin’ireo manampahefana isan-tsokajiny izany. Efa manomboka midina ny toromarika izao amin’ny fisian’izany birao fandraisana fitarainana amin’ny tsy mety ataon’ireo mpiasam-panjakana ambony sy any amin’ireo biraom-panjakana isan-karazany izany. Mpitondran’i Babanao, biraon’i Babanao, fanjakan’i Babanao tokoa ireny ka tsy maintsy sarotiny ny rehetra tsy ankanavaka, manomboka izao!